Kushone isalukazi onesi bedla ingevu, begigitheka | News24
Kushone isalukazi onesi bedla ingevu, begigitheka
Ladysmith - Kushone isalukazi uJoey Badenhorst esibhedlela iLadysmith Provincial ngomhlaka-9 Agasti ngoLwesibili kanti kukholakala ukuthi simelwe yinhliziyo
Ngokusho KweDemocratic Alliance (DA) okuyiyo ebikele abephephandaba iLadysmith gazette lolu daba, abangani nomndeni bakholwa wukuthi ushone ngenxa yobudedengu babasebenzi basesibhedlela.
OLUNYE UDABA: Ishonile ingane yowesifazane okhulelwe oshayiswe yimoto ecar wash
Lesi salukazi esineminyaka engu-80 ubudala sangena esibheldlea kulandela ubuhlungu esifubeni nokuphathwa yisiyezi. Endaweni yokwamukela iziguli lesi saguga salinda udokotela, abangani nomndeni batshelwa ukuthi udokotela usematasa kanti uzosibheka ngokushesha uma eqeda akwenzayo.
Udokotela wafika sekuphele amahora, abangani nezihlobo batshelwa ukuba balinde ngaphandle.
UBadenhorst wangeniswa ewodini eseboniwe ngudokotela, abangani nondeni baze bamshiya bayolanda izimpahla zakhe, ngalo lolo suku babuya, oyedwa wabangani wamuwanga wase ezwa ukuthi umzimba wakhe uyabanda. Abangani ababephatheke kabi babuza onesi ukuthi bayazi yini ukuthi useshonile uBadenhorst. Ngokusho kwabo onesi babezixoxela behleka bodwa bengaboni ukuthi isiguli asisekho bebe bekhona njalo.
Ikhansela le-DA likawadi-12 elalisheqekile iSharon Buys uzwakalise ukucasuka kwakhe ngesigameko wasibiza ngokuthi ngumsebenzi wobubhadla.
Owesibhedlela uThabo Sithole uqinisekise udaba wathi luyaphenywa futhi isibhedlela sizophawula ngalo uma sekuphothulwe uphenyo lwangaphakathi esibhedlela.
37% - 2909 votes